Dowladda oo ku baxday Khilaaf ka jira Magaalada Baraawe + Sawirro – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Dowladda oo ku baxday Khilaaf ka jira Magaalada Baraawe + Sawirro * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowladda oo ku baxday Khilaaf ka jira Magaalada Baraawe + Sawirro
By Ardaan Yare on 27th September 2018
Wefdi uu hugaaminayo guddoomiyaha Maxkamadda Darajada koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute oo ay wehliyaan Xeer Ilaaliyaha Guud ee Ciidamada Qalabka Sida Gaashaanle Sare Cabdullaahi Buule Kameey iyo Saraakiil kale ayaa u tegay magaala xeebeedka Baraawe ee gobalka Shabeelaha Hoose howlo shaqo oo dowladda dhex ee Soomaaliya kaga wakiil yihiin.
Ujeedada wefdiga ay u gaareen Magaala xeebeedka Baraawe ayaa ah sidii loo darsi lahaa isfaham waa u dhaxeeye maamulka degmada iyo saraakiisha ciidamada, iyadoo sidoo kale wefdigan la filayo in ay go’aan ka gaaraan maxaabiis ku xiran Xabsiyada Baraawe.
Inta uu jooga guddoomiyaha ayaa la filayaa in uu sidoo kale booqdo xarumaha ciidamada oo u diyaar garowaya howlagallo guud oo dalka looga xureynayo maleeshiyada Alshabaab.
Maamulka degmada, Saraakiisha Ciidamada Xoogga Dalka iyo kuwa howlgalka AMISOM ayaa garoonka ku soo dhaweeyay wefdiga guddoomiyaha.